Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न – केही नगर्ने यो सरकार केका लागि ?
रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न – केही नगर्ने यो सरकार केका लागि ?
काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी नेतृ एवंम सांसद रामकुमारी झाँक्रीले हाल जनताको सुरक्षा र स्वास्थ्य भन्दा अरु सरकारको प्राथमिकता के हो भन्दै प्रश्न गरेकी छिन। सामाजिक सञ्जाल टुइटरमा झाँक्रीले सरकारलाई प्रश्न गरेकी हुन्।
जनताको सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचार बाट पन्छिन खोज्ने सरकार के का लागि ? के म हामारी नियन्त्रण गर्न सरकार पुर्णतया असफल भएको हो? यदि हो र अब यसरी नै जाने हो भने सार्वजनिक ज़िम्मेदारी र दायित्व लिन पर्दैन? उनको प्रश्न छ ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् ।
सरकारले सबै को रोना सं क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भैरहेकै बेला शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै जनताले कर तिर्दिनँ भने देश कसरी धान्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न सोधेका छन् ।
उनले भनेका छन् ‘उपचार गर्दिनँ’ सरकारले भन्दा जवाफमा जनताले ‘कर तिर्दिनँ’ भने कसरी धान्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा अविलम्ब गर्न विनम्र आग्रह स्वीकार गर्नोस् कि ‘नो ट्रिटमेन्ट, नो ट्याक्स’को बुलन्द जनअभियान सा’म’ना गर्न तयार बस्नोस् ! जय नेपाल !’
प्रकाशित मिति October 20, 2020
कतारको एसियाली खेलकुद आयोजना गर्न नेपालसँग लबिङ
रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँका नेकपा सांसदको आग्रह : विमानस्थल पनि उद्घाटन गरेर फर्किनू !
धनगढीका युवकसंग मंसिर २२ गते विवाह गर्दै श्वेता खड्का
प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको फोन : रामचन्द्र पौडेललाई किन पक्राउ गरेको ?
नेता पौडेलको गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको संकेत : देउवा